Amaphupho ngezinyoni – iAfrika
Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene.
Uma uzizwa zicula – kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze.
Uma uzibona zindizela phezulu – lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba.
Uma uzibona endle – kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile.
Uma uphupha izinyoni ezinkulu – kusho impumelelo uma ucebile futhi
Uma uphupha izinyoni ezincane – kusho impumelelo uma umpofu.
Ukuphupha ihobhe – kusho ukuvaleka kwezothando, ingxabano kulowo othandana naye noma isiphetho esingesihle kubudlelwano onabo ngeleso sikhathi.
Ukuphupha ijuba noma amajuba – kuchaza isikhathi esihle kwezothando, injabulo enkulu ehambisana nokuthula noxolo nalowo osuthe uthandana naye, noma lowo osuke uzomthola esikhathini esingeside esizayo.
Ukhuphupha ukhozi – Kusho ukulahlekelwa isithandwa sakho ngenxa yezenzo zomunye umuntu, ukuthathelwa noma ukuxatshaniswa naso ekubeni wena usuke ungekho ephutheni.
Amaphupho ngenyoni yombani.
Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa.
8 thoughts on “Amaphupho ngezinyoni”
Ukuphupha izinyoni eziningi ezifile.
ukuphupha amaphuphu amabili asesidlekeni.
ukuphupha ulandelwa inyoni emhlophe”ilanda”
Umangiphupha nge ntombi bengithandana nayo futhi ngifisa ukwakha umuzi nayo kodwa yaganela komunye umuntu yangishiya ngiyi phupha izikhathi eziningi ingitshela ngesimo ekuso kuthi nami uma kuthi nami lapho sengithandana nomunye umuntu kube khona innings bese ngicabange yona futhi ngingaphelelwa yithemba ngayo kusho ukuthini lokho.. ngicela ningisize
27/07/2016 at 00:25
13/07/2016 at 03:47